माओवादी–एमाले एकताको सम्भावना कति ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
माओवादी–एमाले एकताको सम्भावना कति ?
काठमाडौं, १५ असोज । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुबै वामपन्थी धारका पार्टी हुन । कुन दल कति वामपन्थी भन्ने प्रश्नको जवाफ दुबै दलको व्यवहारले प्रष्ट पार्छ । यो, विषयमा धेरै बहस गरिरहनु आवश्य लाग्दैन । तुलोमा जोख्ने हो भने दुबैको तौल धेरै लतमाथि पर्दैन । तर, बेला–बेला एमाले–माओवादी एकताले नेपाली राजनीतिमा स्थान पाउने गरेको छ । खासगरी निर्वाचन लगायतका राजनीतिक घटनाक्रमपछि एमाले–माओवादी एकताले स्थान पाउने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दलबाट तेस्रो दलमा झरेपछि एक पटक माओवादी–एमाले एकताको चर्चा चलेको थियो । दुबै दलका शीर्ष नेताहरुले पनि बेला–बेला दुई पार्टी एकताको विषयमा मुख खोल्दै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म यी दलबीच एकताका लागि खास विशेष छलफल भने भएको छैन ।
माओवादीको समर्थमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सरकारले गरेको गतिविधिहरु र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काँध थापेको परिघटनाले माओवादी–एमाले एकताको सम्भावना देख्नेहरु पनि थिए । तर, सत्ता समिकरण बदलिएसँगै विशेषगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच बरफ जम्यो । त्यो बरफ नपग्लेसम्म अहिलेका लागि माओवादी–एमाले सम्बन्धमा न्यानोपन आउने सम्भावना कम छ । तर, राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने मान्यता रहेकाले प्रचण्ड–ओलीबीचको बफर कुनै पनि समय पग्लिन सक्छ । के दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन आउने बित्तिकै माओवादी–एमाले एकता सम्भव होला ? यो अहिलेका लागि अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो शक्ति बनेसँगै माओवादी–एमाले एकताले स्थान पाए झै तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी एकता फेरी एक पटक सतहमा आएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा एमाले कमजोर भएपछि एमालेका कतिपय नेताले अब माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नु पर्ने आवाज उठाएका छन् । दशैंको टीका लगत्तै बसेको नेकपा एमालेको बैठकले आगामी निर्वाचनमा वामपन्थी राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्‍यो । र, एमालेको मुख्य प्राथामिकतामा नेकपा माओवादी केन्द्र पर्‍यो । त्यसैले माओवादी–एमाले एकताको कथन गर्न सहज भएको छ ।
दशैंको टीका सकिए लगत्तै बसेको एमाले बैठकले माओवादीसँग चनावी तालमेलमा जोड दियो । तर, दशै मनाउन गृह जिल्ला रोल्पा पुगेका माओवादीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनले भने तालमेलभन्दा पनि पार्टी एकताको सम्भावना बढी रहेको प्रतिकृया दिए । नेता पुनले भनेका थिए : एमाले र हाम्रो पार्टीको राजनीतिक लाइन अहिले नजिक छ, दुवै पार्टीले सामाजवादी क्रान्ति पूरा गर्ने कार्यदिशामा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छौं, त्यसैले तालमेलभन्दा पनि एकता नजिक छ ।
एकताको सम्भावना कति ?
नेपालमा नेकपा एमालेका लागि माओवादी र माओवादीका लागि एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन । दुबै वामपन्थी दल रहेकाले वामपन्थी विचारधारीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न यी दुई दल सधै प्रतिस्पधार्नमा देखिन्छन् । विभिन्न चरणका निर्वाचनको समग्र मतलाई आधार मान्ने हो भने कम्युष्टि नै बढी रहेको पनि प्रष्ट छ । र, वामपन्थी विचारका सबै मतलाई माओवादी–एमालेको एकता मार्फत एकजुट बनाउनु पर्ने कतिपयले विचार पनि राख्दै आएका छन् । यो, आधारलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने माओवादी–एमाले एमालेका लागि बाटो खुल्न सक्छ । तर, वामपन्थी विचार राख्नेहरुलाई एकजुट बनाउने भावनात्मक बुझाइका आधारमै माओवादी–एमाले एकता सम्भव छैन ।
कतिपय व्यक्ति र राजनीतिक विश्लेषकले माओवादी एमालेमा विलय हुनु पर्ने आधारहरु समेत प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । संगठानिक चुस्तताको आधारमा माओवादी एमालेमा विलय हुनुपर्ने आधार पनि एउटै आचारणका दुई पार्टीबीच स्वीकार्य नहुनसक्छ । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा दुई दलबीच पार्टी एकता भन्दा पनि चुनावी तालमेल सम्मको सम्भावना भने नजिक देखिन्छ । तर, तात्कालिक परिवेशमा माओवादी–एमालेबीच चुनावी तालमेल भए वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा असर पर्नेछ । र, फेरी सत्ता समिकरण बदलिने निश्चत छ ।